Transylvania, ala nke amara na ihe omimi | Akụkọ Njem
Na latin Nsụgharị ọ pụtara "ala karịrị oke ọhịa." Ọ bụ ala mara mma nke ukwuu nke ugwu na oke ọhịa. Aha ya gafere n'ime-ewu ewu na omenala site ọbara Earl nke Bram Stoker, ma ọ bụ ezie na akụkụ a nke Romania Akwụkwọ na sinima taa na-enyere ndị njem aka.
Ya mere, ka anyị lee Transylvania na ndị njem ya.
Ọ bụ akụkụ nke Romania na Ọ dị n’etiti mba ahụ, bụ́ nke nwere otu ugwu nke ugwu Cárpatros nke gbara ya gburugburu. Ọ bụ mmadụ bi n’ime ya nde mmadụ ise o nwekwara ọtụtụ obodo ndị bụ isi, ọ bụ ezie na ụfọdụ ka ndị ọzọ mma maka ndị ọbịa oge ụfọdụ.
Vlad Tepes, onye na - egbu osisi, bụ onye ama ama Wallachian bi na XV narị afọ na nke ahụ, dị ka akụkọ mgbe ochie si kwuo, kpọgidere ihe dị ka puku ndị iro 80. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ dike obodo ebe ọ bụ na mgbe ahụ onye isi ahụ adaba n'aka Alaeze Ukwu Turkey. Ọ ka nweere onwe ya, mana oge ụfọdụ mmekọrịta ahụ na-ese okwu, ọnọdụ na-akawanye njọ mgbe ndị eze ahụ malitere ịhọrọ onye isi na-agwaghị ndị isi Romania.
Na ọnọdụ a Vlad Tepes biri ma nweta aha ya ọbara, ama ama nke mechara mee onye edemede Irish bụ Bram Stoker ide akwụkwọ edemede sitere n'ike mmụọ nsọ ya na 1897. Na njedebe, ọ gara n'ihu na-efe ala ya, mana ugbua na narị afọ nke XNUMX na-adọta ndị njem nleta.
Anyị kwuru na na Transylvania enwere ọtụtụ obodo ma ọ bụ obodo na-atọ ụtọ ma na ụfọdụ bara ụba karịa ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, Brasov ọ bụ ebe a na-agaghị ezere. Nke a bụ otu n'ime obodo ndi ochie echekwara nke oma na Transylvania niile.
Brasov dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Transylvania, Kilomita 166 site na isi obodo mba, Bucharest na aka ndi ozo na mba. Nwere ike ịga ọtụtụ ngosi ihe mgbe ochie, akụkọ ihe mere eme, nkà, ethnography, obodo na ụfọdụ mara mma nke ukwuu e wusiri ike ụlọ ndị dị ka Bran nnukwu ụlọ. E nwekwara ọtụtụ ụka mgbe ochie. Bran Castle dị nso Brasov ma bụrụ a ụlọ gothic Ọ dị ka ihe si n’akụkọ ifo. Njikọ ya na ọnụ ọgụgụ ahụ siri ike karịa ka erere ya Lọ Dracula.
Adịghị ebe dị anya chọọchị ndị e wusiri ike nke Harman, ya na nnukwu ụlọ elu Saxon nke narị afọ nke iri na atọ, na Chọọchị e wusiri ike nke Prejmer, nke kasị ukwuu na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe. Ọzọkwa nso, na Hunedoara, enwere Corvinilor Castle site na narị afọ nke XNUMX na ya Halllọ Nzukọ nke Knight mara mma.
Ọ bụrụ na-amasị gị ochie agha ụlọ e nwekwara Rasnov ebe e wusiri ike site na narị afọ nke XNUMX, nke ndị Teutonic Knights wuru iji chebe ndị Transvan na ndị Turks na Tatars.
na mkpọmkpọ ebe nke nnukwu ụlọ elu nke Poienari Ha bụkwa ezigbo ebe, jikọtara Vlad. Na Leslọ nke Peles Wuru site n'aka King Carol I na etiti narị afọ nke iri na iteghete ọ bụ ọtụmọkpọ ọzọ, dị mfe ịnweta site na bọs ma ọ bụ ụgbọ oloko site na Brasov.
Ebe ọzọ na Transylvania bụ Sibiu, ya na cobb cobbled na ụlọ pastel. Ọ bụ ndị Saxon hiwere ya na narị afọ nke iri na abụọ ma bụrụ akụkụ nke Romania kemgbe 1918. Ọ bụ obodo nwere agbụrụ dị iche iche na nke ahụ gosipụtara na nhazi ya.
Su mepere emepe bụ amara na otu n’ime ndị kacha mma echekwara na mba. Osimiri Cibin gafere ya ma ugwu gbara ya gburugburu. Ọ bụrụ na ịnweghị ịgbazite ụgbọ ala ịkwaga ị nwere ike ịme ya site na ụgbọ oloko site na obodo ruo n'obodo, na-ebufe ezigbo ụzọ.
Ya mere na Sibiu ị ga-eje ije site na akụkọ ihe mere eme na etiti na usoro ya nke akụkụ anọ, atọ, ya Obodo Elu na Obodo Ndịda ya. Na Lower City n'okporo ámá ndị dị ogologo na obosara na e nwere obere n'ámá na ọ bụ ezie na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na mgbidi niile nke oge ochie efunahụla agha obodo, a ka nwere ụlọ elu abụọ na ụka narị afọ nke XNUMX. Uzo ano ato anyi guru aha na mbu di na elu obodo ma gbasaa ugwu.
Muselọ ihe ngosi nka nke ịmara ebe a bụ Ebe Ugwu Egwuregwu Bruckenthal, ma kwaga ntakịrị northwest iji mara Marginimea Sibiului, efere ole na ole nke obodo iri na itoolu. Obodo ọzọ na njem nleta bụ Sighisoaraya na elu ulo elu ya nke mara nma, ulo elu elekere nke XNUMX na uzo nzuzo.
Ọ bụ na Carpathians na ọ bụ mara mma ochie. Ebe akụkọ ihe mere eme ya bụ ebe ihe nketa ụwa kemgbe 1999 na odi ebe a mụrụ Vlad Tepes.Obodo ndi ozo di nma ma ndi ozo di na ndagwurugwu Ariesi ma mara ha dika Moti Land.
E wezụga obodo na obodo nta ndị ọzọ enwere ihe ndị ọzọ Transylvania na-enye anyị. Ọmụmaatụ, mmiri ọkụ. Maka nke ahụ, anyị nwere ike ịgakwuru Ọdọ Mmiri dị na Sovata, nke ha na-ekwu na-agwọ infertility. Ma ọ bụ na-enwe mmiri ọkụ nke Ocna Sibiului, nke dị nso na Sibiu, nke nwere nnu dịka Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ. Iji nwaa sauna gas na-agbọpụ ọkụ anyị nwere ike ịga Cosvana. Nkeji iri abụọ n’ebe ahụ maka nlekọta ahụike.
Na oke ohia na ugwu mpaghara ahụ na-akpọ ndị njem ka ha mee njem, ya mere nke a bụ nhọrọ ọzọ. Ndị Carpathians mara mma ma biri na ya wolf na lynxes ma buru kwa ndi Europe kacha ibu Agba aja agba.
A na-eme atụmatụ na e nwere ihe dị ka puku bea 5 na nnukwu osisi na oke osisi ma o yiri ka ọnụ ọgụgụ mmadụ gbawara n'oge onye ọchịchị aka ike bụ Ceausesco onye machibidoro ịchụ nta ha (naanị ya nwere ike ime ya). E nwere ọtụtụ isi ihe nyocha nke ndị isi obodo chọrọ, yabụ ọ kachasị mma ịdebanye aha maka ịgagharị.
Ị chọrọ gbazite ụgbọ ala ma na-agagharị n'enweghị nsogbu? Mgbe ahụ ị pụrụ ịgbaso ndị Fzọ Transfagarasan, ụzọ ndị agha wuru na 70s nke narị afọ nke XNUMX, Na oge ndị Kọmunist, ọ na-agafe Ugwu Fagaras na zigzags na ndagwurugwu Bâlea Lake, gafere ọwara mita 900 wee gbadata n'oké ọhịa Wallachian.
Ọ bụrụ na ị ga-etinye oge na Transylvania mgbe ahụ na ndepụta a nke ebe nkiri na ebe m ga-agụnye Alba-Iulia, ya na nnukwu ụlọ elu nke dị na windo maka oge gara aga, ndị Turda Nnu M, magburu onwe ya ma Mamamurs na ebe a na-eli ozu ha, echebe site UNESCO. Ihe niile, n’ezie, tinyere ya mmanya ọcha na nri mpaghara.
Ọ bụrụ na-amasị gị ochie Europe, ugwu obodo nta, castles, kpakpando ehihie na abalị, oké ọhịa, akụkọ ọdịnala jupụtara mmadụ na akụkọ na-emeghị ... mgbe ahụ Transylvania agaghị emechu gị ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Romania » Transylvania, ala nke amara na ihe omimi